Interview with Agni Sapkota | 'विषयमा सहमति भए कांग्रेस नेतृत्व'
'विषयमा सहमति भए कांग्रेस नेतृत्व'
मेचीकाली : 2012-12-25 18:51:49
प्रवक्ता, एनेकपा माओवादी
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका निकै निकट मानिने नेता अग्नि सापकोटा एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता हुन् । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सापकोटा एकीकृत माओवादीभित्र निकै प्रभावशाली मानिन्छन् । दलहरुबीचको वार्तामा पनि सक्रिय हुने गरेका सापकोटासँग सहमतिको सम्भावना लगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
सरकार बहिर्गमनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र पुनः अन्तरसंघर्ष सुरु भएको हो ?
यो अन्तरसंघर्ष नै त होइन, तर पार्टीभित्र गम्भीर प्रकारको छलफल र बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यही अनुसार नै पदाधिकारीको विस्तारित बैठकमा पनि छलफल चलेको छ । सहमति गर्ने र राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आधारभूत र मूलभूत रूपमा पार्टीभित्र फरक धारणा छैन । तर फेरि जुन कोण र केही विषयमा भने छलफल जारी छ । उत्तम, मध्यम र अन्तिम सहमति के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
तपाईंले भनेको गम्भीर बहस कस्तो हो ?
सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषयमा र अहिलेको परिस्थितिका विषयमै गम्भीर बहस सुरु भएको हो । समयको चाप धेरै परिसक्यो । दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको छ । त्यसले गर्दा परिस्थिति असाध्यै चलायमान बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा रूपमा भन्दा सारमा बढी जोड दिनुपर्छ । प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भनेका छौं । प्याकेजमा सहमति भनेको वैशाखमा निर्वाचन भन्ने सहमति भएको छ । मिति तय गर्नुप¥यो । संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । नियमकानुन फेरबदल गर्नुपर्नेछ । अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यो सरकारले अरुलाई नेतृत्व सुम्पिनुपरेमा त्यसको आधार के हुन सक्छन् । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि पहिले पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको प्रतिबद्धता, सेना समायोजनमा बाँकी रहेका काम, त्यसमा तहको विवाद कायमै छन् । शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू जस्तै, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग निर्माण, निर्वाचनमा जान अरू आवश्यक कुरा पनि बाँकी छन् । संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति यसमा पनि विशेष गरेर निर्वाचन आयोगमा पदपुर्ति गर्नुपर्छ । त्यो प्याकेजभित्र सहमतिको सरकार भनेका छौं । त्यसमा सहमति गर्ने कुरामा हामीबीच विमति छैन । फेरि पार्टीमा यो कुरा पनि स्पष्ट छ । बाबुरामजीकै नेतृत्वमा पहिले जोड दिने, त्यो भएन भने पार्टीभित्रैबाट विकल्पमा जोड दिने, त्यो पनि भएन भने गठबन्धनभित्रबाट सकिन्छ भन्ने कुरा हो, तर अहिले फेरि गठबन्धनबाहिर जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफल प्रारम्भ भएको छ । उनीहरू(प्रतिपक्षी) आए भने कुनै समस्या भएन । त्यो सर्वोत्तम नै भयो, भएन भने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हो । उत्तम अवस्थामा भएन, मध्यम अवस्थामा पनि सहमति भएन भने अन्तिम अवस्थामा गर्ने सम्झौताको परिभाषाका बारेमा अलि बढी छलफल भएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिमा अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । उहाँले अन्य दलसँग गरेको सहमति प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्षले मान्दिन भन्नुभएको छ । यसले गर्दा पार्टीमै द्वन्द्व रहेछ भन्ने हुँदैन ?
पार्टीमा द्वन्द्व हैन बहस भने छ । बहस भएकै हुनाले बैठक बसेको हो । बैठकमा अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले लगायतका दलसँग भएका बैठक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनसँग भएका छलफल, निर्णय र निष्कर्ष, दुईपक्षीय अनौपचारिक रुपमा भएका छलफल र सहमतिका बारेमा अध्यक्षले आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै नेताले कुरा राख्दा मूलभूत र आधारभूत रूपमा पार्टी एकैठाउँमा र नेताहरू एकैठाउँमा हुनुहुन्छ । वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्छ भन्नेमा केहीमा विमति छैन । तर, फेरि कसरी सम्मानजनक सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल छ । त्यसमा सहमति गर्न सकिन्छ ।
सम्मानजनक सहमति भनेको के नि !
परिवर्तनका एजेन्डा त एनेकपा माओवादीले नै उठायो । परिवर्तनको संवाहकका रूपमा त हाम्रो पार्टी छ । संघीयताका विरुद्धमा अहिले ठूला षड्यन्त्र भइरहेका छन् । अझ भन्ने हो भने यो देशमा तीनवटा राजनीतिक धारको टक्करजस्तो भइरहेको छ । यसमा पश्चगमनकारी धार धेरै कमजोर भएको छ । कहिलेकाहीं यथास्थितिवादी र अग्रगमनकारीबीच संघर्ष चल्दा मेरो मौका आउँछ कि भनेर ऊ उत्साहित हुन खोज्छ, तर त्यो अवस्था छैन । अहिलेको धार भनेको यथास्थितिवादी र अग्रगमनबीच नै संघर्ष हो । यी सबैलाई विचार पु¥याउँदा सबैभन्दा बढी देश र जनताको हितमा के हुन सक्छ भनेर विचार गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । अहिले भएको उपलब्धिलाई ग्यारेन्टी गर्ने र थप उपलब्धिलाई अगाडी जाने हुनुपर्छ । षड्यन्त्रका ढोका सवै बन्द गर्ने र नेपाली जनता अघि जान सवै ढोकाहरू खोल्ने नै सम्मानजनक हो । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि गम्नुभएन । यसका लागि सम्मानजनक सहमति भनेका हौं । यो नै पार्टीको बटमलाइन पनि हो । हामीले पहिलेदेखि नै पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान हाम्रो बटमलाइन हो भनेर भनेका छौं । आधारभूत कुराको परिधीमा रहेर अधिकतम हितमा आधारित भएर सहमति गर्ने सम्मानजनक हुन्छ ।
यो बैठकले त प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दैछ भन्ने हल्ला थियो नि, किन सकेन ?
गर्न सकेन, गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने नै भए । र, त्यस्तो होइन । हाम्रो पार्टीमा अहिले राम्रो समझदारीको आवश्यकता छ । त्यसो हुँदा सबै पार्टी र हाम्रो पार्टीमा पनि गर्ने सहमति सर्वसम्मतिले गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । यसले परिवर्तनलाई सुनिश्चित र वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि सहयोग पुग्छ । अहिले कसैलाई फिर्ता बोलाउने र कसैलाई स्थापित गर्ने भन्ने होइन, अहिले जनताको हीतको उत्तम बिन्दु के हुन सक्छ भनेर सहमति गर्ने हो । हाम्रो पार्टी देशको ठुलो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, परिवर्तनको एजेन्डाको संवाहक भएकाले पार्टीमा सानो कुरा हुँदा पनि बाहिर ठुलो तरंग पैदा हुन्छ ।
यसले एकातिर सकारात्मक पनि हो । अहिले पनि जनताको आशाको केन्द्र भनेको हाम्रै पार्टी छ । अर्कातिर यसले केही नकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ । सधैंभरि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै एकसाथ आउने गर्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने उतारचढावसँगै हाम्रो पार्टीमा पनि प्रतिविम्ब पर्छ ।
भनेपछि बहुमतले बाबुराम भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गराउन सक्नुभएन ?
फिर्ता बोलाउने र नबोलाउने विषय छैन । यो प्रश्न नै उपयुक्त छैन । राजनीतिक पार्टीका बीचमा सहमति गरेर राष्ट्रलाई निकास दिने हो ।
त्यसका लागि पहिले पार्टीभित्र एउटै धारणा आउनु पर्दैन र ?
एउटै धारणा आउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेरै छलफल चलाउँदै छौं । हामी छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं । सहमतिको पनि विकल्प छैन । हाम्रो पार्टीमा सहमति गर्नुको पनि विकल्प छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्ने भनिएको थियो, फिर्ता बोलाउने भनिएको थियो, यी सबै बजारका हल्ला हुन् । पार्टी बाहिर सोचेजस्तो कमजोर छैन । जतिबेला जस्तो हावा बग्छ त्यस्तो हुँदैन । कारबाहीको त कुरै भएको छैन । तर, विचार आ–आफ्ना हुन्छन् । मूलभूत विचार शान्ति र संविधानको लाइनमा हामी एकठाउँमा छौं । त्यो बाहेक सोँच र धारणा त फरक फरक हुन सक्छ । त्यसका लागि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।
अब कहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहुन्छ त ?
अब हाम्रो प्रयत्न छिटो गर्नुपर्छ भन्ने छ । जति ढिला ग¥यो त्यति हामीलाई समय पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले पनि पुसको २० गतेसम्म भएन भने समय पुग्दैन भनेको छ । त्यसकारण हामी चाँडोभन्दा चाँडो सहमति गर्नुपर्छ ।
तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेकाले छिटो सहमति गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यो भनेको के हो, अलि प्रस्ट पारिदिनुस् न ।
जब हामी एकतावद्ध हुन्छौं त्यसबेला कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । हाम्रै बीचमा फाटो भएपछि कोहीले कांग्रेसलाई, कोहीले एमाले, कोहीले एमाओवादीलाई र कोहीले माओवादीलाई विभिन्न तरिकाले खेल्ने मौका पाउँछन् । अब घरमा परिवार मिलेन भने छिमेकीले चासो राख्छन् । आन्तरिक रूपमै महत्वपूर्ण हुन्छ तर हामी मिल्न सकेनौं भने अरूका स्वार्थ पनि यहाँभित्र घुस्छन् ।
बाहिरको स्वार्थ घुसेका कारण यहाँका दलहरू नै मिल्न सकेनन् भन्छन् नि !
हामी मिल्न नसकेका कारण नै यी सबै कुरा भएका छन् । यी सबै कुरा भएका कारणले पनि अब मिल्न पर्छ भनेको पनि हो । हामी मिल्न नसकेको कुरा यथार्थ पनि हो । कुनै ढाकछोप गरेर हुँदैन । त्यसैले अब ढिला गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीहरूमा पनि त्यो बोध भएको छ । त्यसैले दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सहमति गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।
तपाईहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ तर अहिले नै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोजिरहनुभएको छ । अहिले नै सहमति गरेर किन निर्वाचनमा जानुप¥यो ?
हामीले अन्तरवस्तुमा भनेका छैनौं । हामीले राजनीतिक रूपमा या आर्थिक रूपमा संविधानसभामा धेरै ठूलो लगानी गरेका छौं । संविधानसभामा ९० प्रतिशत काम सकिसकेको थियो । यो राष्ट्रको ठूलो सम्पत्ति हो । यसलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ । सर्वसम्मत विषयहरूको रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने र विवादित विषय संविधानसभाले नै छिनोफानो गर्छ । अहिले नै सहमति भएको भए संविधान घोषणा भइसक्थ्यो ।
त्यसो भए अब सहमति भनेको निर्वाचनका विषयमा मात्रै हो ?
निर्वाचनका विषयमा नै सहमति खोजेका हौं ।
यसमा त कांग्रेस र एमाले पनि तयार छन् त किन सहमति हुन सकेन ?
अहिले तयार भएकाले नै सहमतिको नजिक पुगेका छौं भनेको हो । अहिले सबै सहमतिको नजिक पुगेका छौं ।
कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सहमति कायम हुन्छ ?
प्याकेजमा सहमति भएपछि हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं । भएसम्म बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने, नभए पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व खोज्ने, नभए गठबन्धनबाट खोज्ने तर यी सबैमा प्रतिपक्षी मान्दै मानेनन् भने राष्ट्रलाई बन्दी बनाउन हुँदैन । त्यसबेला छलफल गरेर निकास दिन सहमत हुनुपर्छ ।
प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ ?
सहमति भएमा कांग्रेस नेतृत्वमा जान हामीलाई गाह«ो छैन । विषयमा सहमति भए कांग्रेस नेतृत्व मान्न सकिन्छ । पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, हिजो संविधानसभामा सर्वसम्मत भएका विषयमा अपनत्व लिने भए कांग्रेस नेतृत्व मान्न हामीलाई अप्ठेरो छैन । त्यसैले निकास निकाल्न हामी तयार छौं ।
त्यसो भए पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयतामा जान कांग्रेस पनि तयार भएको छ ?
यो कुरामा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ ।
तर तपाईंहरू कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई मान्दैनौं विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ रे हो ?
हामीले नै यी विषयहरू उठाएर स्थापित पनि ग¥यौं । स्थापित गरेको सन्दर्भमा परिवर्तनको र परिवर्तनकारी एजेन्डाको संवाहक पनि हामी नै हौं । धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि सहमति हुन सकेन । विपक्षीहरू नआएपछि राष्ट्रलाई बन्दी बनाउने कुरा भएन । त्यसैले अरूे पोजिसन लिएर बस्दा पनि हुने भयो, तर हाम्रो पार्टीले त निकास नै दिनुपर्छ । त्यसैले हामीले छान्नैपर्दा सार छानौं भनेका छौं । हएजेन्डा र मुद्दा छाड्न सकिँदैन । राजनीतिक लाइनमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं । अहिले पनि कुरा त्यही हो । पार्टीले निर्णय गर्दा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छ । हामीले राष्ट्रलाई हरहालतमा निकास दिन वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकजुट भएर लागेका छौं ।
वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ त ?
वैशाखमा निर्वाचन हुनैपर्छ । वैशाखमा निर्वाचन भएन भने भयावह स्थिति आउन सक्छ ।